अशोक दर्जीको घर अवोलाकन गरेर नायक सबिन श्रेष्ठले के भने त ? (भिडियो सहित ) – Complete Nepali News Portal
अशोक दर्जीको घर अवोलाकन गरेर नायक सबिन श्रेष्ठले के भने त ? (भिडियो सहित )
Sisir Budhathoki July 5, 2018
मलेसिया र दुवैको कार्यक्रम सकेर बाल गायक अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकी आए लगतै पोखराको कार्यक्रम सकेर अशोकको घर निर्माणका लागि झापा गएका छन् । झापामा गायक टंक तथा अशोकको घर निर्माणमा जुट्नु भएका सबै टिमसंग अशोकको बारेमा तथा मन बिनाको धन ठुलो बोलको गीतकारका बारेमा कुरा गरिएको छ । अशोकको घर अवोलोकन गर्नका लागि नेपालका चर्चित नायक सबिन श्रेष्ठ पनि आएका छन् ।घरको बारेमा के भनेता नायक सबिन श्रेष्ठले ?तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।